Nagu saabsan | Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd.
Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare ku takhasustay horumarinta, wax soo saarka, iibka iyo adeegyada farsamada ee daawada xoolaha, iyada oo la diiwaan geliyey lacag dhan 80 milyan oo yuan. Hadafka ah "Boqol Sano oo Nolol ah, Xannaanada Xoolaha ee Xoogan iyo Barwaaqada Beeraha", shirkaddu waxay ka go'an tahay inay noqoto mid heer-koowaad ah oo heer caalami ah oo bixisa wax soo saarka daaweynta xoolaha ee ku saleysan tikniyoolajiyadda iyo hibada.
Shirkadda waxaa laga aasaasay Aagga Horumarinta Haweenka Shijiazhuang Nanwu 2003. 2004, waxaa lagu qiimeeyay "Star Enterprise of Veterinary Medicine Production Scale" ee Magaalada Shijiazhuang. Sannadkii 2005, waxaa lagu qiimeeyay "Hebei Gobolka Sayniska iyo Teknolojiyada Ganacsiga" iyo "National Star Promoting Project Key Promotion Product Enterprise" "Sanadkii 2006, waxaa lagu qiimeeyay" nooca dawada xoolaha ee ugu awoodda badan warshadaha dawada xoolaha ee Shiinaha "ee Shiinaha Ururka Caafimaadka Xayawaanka, iyo 2007 waxaa lagu qiimeeyay "Top 20 Shirkadaha Caafimaadka Xoolaha ee Gobolka Hebei" oo ay soo saareen Ururka Wax soo saarka Caafimaadka Xoolaha ee Hebei. Sannadkii 2008, waxaan u baahannahay 35.5 mu oo dhul ah oo ku yaal Xinle Airport Industrial Park, Shijiazhuang City, waxaanna dhignay saldhig wax soo saar oo cusub, sidaasna ku galay marxalad cusub. Sannadkii 2010, 4 aqoon-is-weydaarsi wax-soo-saar iyo 7 khad oo wax soo saar ah oo saldhigga cusub ee shirkaddu ka soo gudbay kormeerka GMP-ga qaranka hal mar, oo si rasmi ah u bilaabay hawlgalkii wax-soo-saarkii. Isla sanadkaas, waxaa lagu qiimeeyay "Tobanka Tobnaad ee Unugyada Dhiirrigelinta Maalgashiga Muhiimka ah" ee Magaalada Xinle. Sannadkii 2011, shirkadda waxaa si rasmi ah loo siiyay "Saldhigga Tababarka Tababarka" oo ay siisay Jaamacadda Beeraha ee Huazhong. Wadashaqeynta iskuulka iyo shirkadaha ayaa la sii wanaajiyay. Sannadkii 2012kii, si aan u horumarinno suuqa caalamiga ah, ayaan mar mar marnay. ISO9001, shahaadada nidaamka tayada caalamiga ah ee ISO22000. Sannadkii 2013, shirkaddu waxay ballaarisay silsiladda warshadaha waxayna ku lug yeelatay aagga dhir dhaqashada. Qorshaha guud ee loogu talagalay mashruuca beeraha doofaarka 120,000 ee cilmiga bey'ada loo qaabeeyey ayaa loo oggolaaday dhismaha. Wejiga koowaad ee mashruuca wuxuu ku fadhiyaa dhul ka badan 300 oo hiktar. Waqtigan xaadirka ah, si fiican ayaa loo shaqeeyaa waana mashruucii ugu weynaa ee biyo-dhaqashada ee ka socda deegaanka Xinle. Sannadkii 2015, waxaa bilaabmay u diyaargarowga dhismaha aqoon isweydaarsi cusub, iyada oo lagu daray dhowr layman oo wax soo saar ah oo loogu talagalay kiniinnada, granules, irbado aan dhammaad lahayn oo jeermiska looga dilo, iwm, si loogu diyaar garoobo horumarinta suuqa caalamiga ah. Tan iyo aasaaskii shirkadda, iyada oo loo marayo horumarinta beero-dhaqashada, quudinta iyo isku-darka iyo soo iibsiga, waxay si tartiib tartiib ah ugu guuleysatay kala-duwanaanta degdegga ah ee dhinaca beeraha casriga ah. In 2016, shirkadda la siiyay cinwaanka "Key Shijiazhuang Beeraha Warshadaha Leading Enterprise". Bishii Janaayo 2017, khadka cusub ee wax soo saarka ee kiniiniyada, granules iyo cirbadaha aan nadiifka ahayn ee la ciribtiray ayaa maray aqbalaadda GMP iyo ISO, waxayna bilaabeen hawlgal iyo wax soo saar. Waxaa loo qiimeeyay isla sanadkaas. "Hebei Science and Technology SMEs". In 2018, waxaa la siiyay "Hebei Industrial Enterprise R&D Institution" iyo "High-tech Enterprise". Bilowga sanadka 2019, waxaa lagu qiimeeyay "Shirkada hormoodka ah ee hormarinta Gobolka Hebei" iyo "Hebei Science and Technology Small Giant Enterprise". Shirkaddu waxay si adag u aaminsan tahay in tiknoolajiyadda aasaasiga ahi ay tahay wax soo saarka ugu horreeya!
Shirkaddu hadda waxay leedahay 216 shaqaale, iyo waxbarashada kuleejka iyo wixii ka sareeya waxay u dhigantaa 80% wadarta guud ee shirkadda.
Waqtigan xaadirka ah, iibinta wax soo saarka gudaha waxay sii daayaan in ka badan 20 gobol, waxayna u adeegaan kooxo waaweyn iyo beero yar yar iyo dhexdhexaad.
wax soo saarkiisa waxaa loo dhoofiyaa 15 wadan (Ethelbia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, iwm).
Shirkaddu hadda waxay leedahay 216 shaqaale, iyo waxbarashada kuleejka iyo wixii ka sareeya waxay u dhigantaa 80% wadarta guud ee shirkadda. Dhanka cilmi baarista iyo hormarinta, shirkadan ayaa hada lashaqeynaysa jaamacadaha iyo macalimiinta sida jaamacada beeraha ee Huazhong iyo Wuhan University of Light Industry. Waxaa jira 4 daroogo oo heer qaran ah oo cusub oo lagu dhawaaqay, iyo 6 badeecooyin patent ah iyo 3 qaabab diyaarinta patent hal abuur leh ayaa la helay. Isla mar ahaantaana, xarun taageerta R&D iyo xarun xakamayn tayo leh iyo xarun kormeer tayo leh ayaa la dhisi doonaa si loogu dhiiro galiyo horumarka joogtada ah ee shirkadda.
Waqtigaan la joogo, iibinta wax soo saarka gudaha waxay sii daayaan in ka badan 20 gobol, waxayna u adeegaan kooxo waaweyn (COFCO, Yangxiang, Luo Niushan, Tangrenshen, Yurun, Xiangda, iwm) iyo beero yar yar iyo dhexdhexaad. Sannadihii 2017 iyo 2018, waxay sii dhaafeen Itoobiya, Aqbalitaanka Suudaan Caalamiga ah ee GMP waxay fureysaa suuqa dibadda ee Lihua, waxsoosaarkiisana waxaa loo dhoofiyaa 15 dal (Ethelbia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, iwm).
Shirkaddu waxay ku saleysan tahay fikrad guud, oo leh ruuxi hore u socoshada iyo daba-galka heer sare, tayada loola dhaqmo dadka si daacadnimo ah iyo howl karnimo leh, iyadoo dadka leh maskaxda iyo dadka maanka ku haya; laga bilaabo horumarka muddada-dheer ee shaqada, oo leh hibada himilada. Iyada oo loo marayo hordhaca, beerashada iyo horumarinta hibooyin aad u wanaagsan, iyo iyada oo loo marayo wax soo saar iyo adeegyo tayo sare leh si waxtar wanaagsan looga geysto horumarinta warshadaha xanaanada xoolaha Shiinaha, Hebei Lihua Pharmaceutical ayaa runtii xaqiijin doonta ballanqaadkeeda ku aaddan qarniga 21aad ee daawada xoolaha iyo warshadaha xannaanada xoolaha. , oo wuxuu waday dadaal aan kala go 'lahayn Shaqo adag!
Aqoon isweydaarsiga wax soo saarku wuxuu si adag u fuliyaa shuruudaha maareynta GMP wuxuuna u baahan yahay shaqaale kasta oo ka mid ah faahfaahin kasta si looga dhigo inay ogaadaan in tayada wax soo saarku aysan ahayn wax yar. Kaliya maaraynta adag iyo maaraynta jaangooyooyinka ayaa soo saari kara wax soo saar wanaagsan, taas oo ah waxa aan inta badan dhahno, waxaa jira iskudhafyo maskaxda ku jira, Dabcan, daawo samee.
Xarunta R & D
Shirkadeenu waxay ku saleysan tahay sayniska iyo tikniyoolajiyadda iyo hibada, waxaana ka go'an inay abuurto nooc cusub oo leh astaamaha Lihua. Si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee wax soo saarka daawada xoolaha ee suuqyada guud ahaan dalka, Lihua Pharmaceutical waxay ku adkeysaneysaa inay istaageyso dhererka warshadaha, waxay soo bandhigeysaa khubaro badan oo laf dhabar u ah cilmi baarista iyo horumarka Lihua, waxayna lashaqeeysaa khubarada ugu sareysa iyo sheybaarada. warshadaha si kor loogu qaado horumarinta cilmi baarista daroogada iyo horumarinta. . Shirkaddayadu waxay u hoggaansamaysaa ruuxa caqliga waxayna diiradda saareysaa soo saarista alaabada. Lix shey oo jira ayaa ku guuleystey shatiyada nooca utility-ga qaranka iyo seddex shey ayaa leh wuxuu ku guuleystey shatiyadaha hal abuurka qaranka , oo hogaaminaya isbeddelka warshadaha. Isla mar ahaantaana, waxay ku dhawaaqeysaa daawo cusub oo heer qaran ah waxayna dhiseysaa sumadda Lihua. Waxaan si adag u aaminsanahay shaqada gaabiska ah iyo shaqada adag, xariifnimada iyo tayada!